Ugcine eboshiwe othumbe umndeni emzini wabazali | News24
Ugcine eboshiwe othumbe umndeni emzini wabazali
Cape Town – Amaphoyisa eBrandwacht ngaseMossel Bay esifundazweni iWestern Cape abophe owesilisa oneminyaka engu-39 ubudala ngamacala okuzama ukubulala kulandela isigameko sokuthumba esenzeke emzini wabazali bakhe ngeSonto.
Okhulumela amaphoyisa uCaptain Malcolm Pojie uthi isigameko senzeke ngabo-09:00 ekuseni ngeSonto ngemuva kokuba umsolwa edubule amahlandla amaningi esendlini.
"Amaphoyisa athunyelwe endaweni yesigameko ngabo-09:00 ekuseni. Ngokuhamba kwesikhathi amaphoyisa aseDa Gamaskop ajoyinwe yi-POPS ukuzama ukuxazulula isimo. Imizamo eminingi yokuxazulula isimo ayiphumelelanga,” esho.
"Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ubadedelile abazali bakhe kanye nomfowabo, bengalimele.”
OLUNYE UDABA: Kuboshwe owesifazane ngokutholakala kosana olushonile ethoyilethi ebhanoyini
Owesilisa ube esedubula ebhekise emaphoyiseni esebenzisa izibhamu ezahlukene.
UPojie uthe akulimalanga muntu kulesi sigameko, ngaphandle nje kwezimoto zamaphoyisa nezabezimo eziphuthumayo.
"Ngokuhamba kwesikhathi kuthunjelwe ithimba le-Special Task Force ngabo-18:00 [ngeSonto]. Umsolwa uhluliwe, wabanjwa wayiswa esitokisini,” kusho uPojie.
UPojie uthe owesilisa kulindeleke avele eNkantolo kaMantshi eMossel Bay kuleli sonto ngecala lokuzama ukubulala, namanye amacala asazothweswa wona.